China Mpempe ejiji dị mfe obere obere obere akpa obere akpa ụdị ifuru obere akpa obere akpa 3 mpịachi obere akpa Factory na onye na-eweta | Sansan
Fashionmụ nwanyị ejiji dị mfe obere obere obere akpa obere akpa ụdị ifuru obere akpa obere akpa 3 mpịachi obere akpa
Ihe ndi PU na eme ka gburugburu ebe obibi di nma, ihe ndi edo edoghi anya ya bu ihe apuru iru mmiri. Ọ tụrụ nha 3.9 sentimita x 3 sentimita asatọ x 1.2 sentimita (ihe dịka 10 cm x 9 cm x 3.2 cm) ma tụọ 110 gram.
Ihe Nke Mba. ywssd-035
Na obere akpa 3 mpịachi
Usoro mmeghe igbachi
Ọdịdị nke imepụta obere ngwugwu onyonyo, onye ji ya ụgwọ, okwa kaadi, ebe zoro ezo, onodu mgbanwe
.Zọ Zọ ochie
Ihe ndị a ma ama ifuru
Ihe isi ike Dị nro
Agba odo, acha anụnụ anụnụ, nwa, pink, bea na-acha ọbara ọbara
Ibu ngwaahịa 0.11kg
Ogo ngwaahịa 10 * 9 * 3.2cm
Obere akpa a nke ọma nwere 1 nnukwu ọnọdụ akụ, ebe nchekwa kaadị 5, ebe foto na-ahụ ụzọ na 2 zoro ezo zoro ezo. 1 mgbanwe n'akpa uwe nwere nnukwu ihe eji achọ mma igwe nwere ike ịchekwa mgbanwe na obere ihe. Iji ya mee ihe zuru ezu iji zoo choo.
Ejiri Roses mara mma na nke siri ike chọọ elu elu nke akpa ahụ, na-egosi ịdị mma. Anyị na-elekwasị anya na nhazi niile, ma na-agbaso ngwaahịa zuru oke. Anyị kwenyere na ihe ndị dị elu, ihe eji echepụta echiche na omenka nke mbụ nwere ike iwetara gị ahụmịhe ngwaahịa.
Adabara ụmụ nwanyị nọ n'afọ niile. Enwere ike inye ya onyinye dịka onwe gị, ndị ezinaụlọ, ndị enyi nwanyị, mee ka ha ju ha anya ma mara mma, ma wetara ha ụbọchị ọma.
Nke gara aga: Akpa lutmụ nwoke na-acha uhie uhie na obere akpa akpa akwa
Osote: New Wallet Lady Short Fashion Korean Zipper Tassels 2 obere akpa
Akpa iplọ Akwụkọdọ Egwuregwu
'Smụ nwoke obere akpa mkpirisi mkpụmkpụ ...
Ọhụrụ USB chaja ụmụ nwoke na-eme ihe nkịtị c ...
New akpa ipigide akpa Akpa ogologo zipa clu ...
Ladmụ nwanyị ọhụrụ na-ejide obere akpa akpa ogologo oge maka mmachi ...